China Stone Paper extrusion Line ifektri abakhiqizi | Umusa
Umugqa Wetshe Eliqoshwe Ngamatshe
Isingeniso esifushane semikhiqizo yamaphepha amatshe:
Iphepha letshe liyinto entsha phakathi kwephepha nepulasitiki, elingakwazi ukufaka esikhundleni kuphela ingxenye yendabuko yephepha elisebenzayo, iphepha lobuchwepheshe, kepha futhi lithathe indawo enkulu yokupakisha kwendabuko kwepulasitiki. Futhi nge
Inezici zezindleko eziphansi nokucekelwa phansi okulawulekayo, okungagcina abasebenzisi izindleko eziningi ngaphandle kokungcola. Ngokombono wokushintsha iphepha elithile lendabuko, lingagcina ihlathi eliningi emphakathini.
Izinsizakusebenza zezinkuni, futhi kunganciphisa ukungcoliswa okwesibili okwenziwe kunqubo yokwenza iphepha; ngokombono wokushintsha ingxenye yendabuko yokupakishwa kwepulasitiki, kungonga izwe lonke uwoyela wezinsizakusebenza (ithani ngalinye lingasetshenziswa).
Yonga u-2.3 wamathani kawoyela), umkhiqizo ungalulazwa ngemuva kokusetshenziswa, futhi ngeke kubangele ukungcoliswa kwabamhlophe kwesibili noma okwesibili. Ukuvikelwa kwemvelo okusha imboni yamaphepha yamatshe ithatha izinto ezahlukahlukene, ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe, izinkambu zohlelo lokusebenza.
Isikhala esandisiwe sibanzi kakhulu futhi siyimboni yokuphuma kwelanga enamandla amakhulu ngokweqile.
Uhlolojikelele lwe-Eneral lwe-Stone paper line line production wall / notebook yokwenza umshini.
Leli phepha ligcwele ukushaya ifilimu, i-streamer noma i-calender, futhi isixazululo sokumboza silungiswa ngokuya nge-formula.
kwakheka phakathi kokumboza iroli, ukumboza izinto ukondla umehluko wejubane le-foller, uyabona ukufana nokuqina kokunamathela kokumboza ephepheni, futhi ngemuva kokuhiswa kwe-ovini, phinda isenzo esifanayo sokumboza ephepheni emuva, ekugcineni ukuzinza kokuphikisana okuqhubekayo kungaphela umqulu wephepha wamatshe.
Izingxenye Eziyinhloko ze-Stone paper production line wall paper / notebook yokwenza umshini.
30-150m / iminithi
60-200m / iminithi
Langaphambilini Umugqa we-PVC Granulation weSoft / Rigid
Umugqa we-Cpvc Pipe Extrusion
Umugqa We-extrusion Pruduction
Pe Pipe Ukukhishwa
Umshini wePe Pipe extrusion
Umugqa we-Ppr Pipe Extrusion
PVC Pipe Ukukhishwa
PVC Pipe extrusion Umugqa
Umugqa we-PVC lukathayela we-Tile Extrusion
Umugqa we-PVC Granulation weSoft / Rigid
Umugqa we-TPE Profile Extrusion
Umugqa we-PVC Pipe Extrusion (4 Cavities)
Umugqa we-PVC Glazed Tile Extrusion Line